कृषि बीमा किन गर्ने ? केका लागि गर्ने, के के चाहिन्छ ? – NewsAgro.com
January 28, 2019 January 30, 2019 newsagro0Comments असिना, कृषि बीमा, चट्याङ, पहिरो, बाढी, रोग ब्यादी
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालको आधा भन्दा बढी जनशक्ति यसै पेशामा लागी रहेका छन् ।
बैदेशीक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुको सङख्या पनी दिनप्रती दिन बढ्दै गईरहेको छ आखिर नेपालमै जग्गा खाली राखेर कती दिन चाही हामी वैदेशीक रोजगारको लागि विदेश मात्र धाईरहनु पर्ने यस्तो परिस्थितिलाई कहिलेसम्म हामीले अल्झाईरहने त ? प्रशन चिन्ह यहाँ खडा भएको छ ।
एक त वैदेशीक रोजगार एक अवसरको रुपमा रहेको छ कैयौ युवाहरुको लागी केही सिप सिकेर नेपाल मै कृषि क्षेत्रमै नयाँ काम गर्न युवाहरुले सफलता हासिल गरेको कुरा पनी हामी सुन्दौ आईरहेका छौ । समय परिर्वतन भईसकेको छ विज्ञान प्रविधिको उपस्थिति पनी कृषि पेशामा भईसकेको छ । त्यसैले यस पेशाा पनी केही फरक तरीकाले गर्दा पक्कै पनी राम्रो नतिजा हात पर्न सक्छ ।
कृषि बीमा गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरु
कृषि बीमाको बारेमा त सायद नै जो कोहीले पनि बुझनु भएको होला तर यसको बारेमा बुझेर मात्र हुदैन । बीमा गर्दा चाहिने आवश्यक कागजातको बारेमा जान्न पनि जरुरी देखिन्छ ।
सामान्य रुपमा कृषि बीमा गर्दा चाहिने कागजातहरु यस प्रकार रहेको छ ।
१। पूर्ण रुपले भरिएको प्रस्ताव फाराम
२। सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारीस पत्र
३। आवश्यकतानुसार सम्बन्धि कृषि कार्यालयको सिफारीस पत्र
दाबीका लागी चाहिने कागजातहरु यस प्रकार रहेको छ।
१। सक्कल बीमालेख (आशिंक क्षति भएको अवस्थामा बीमालेखको छाँया प्रति)
२। पूर्ण रुपले भरिएको दाबी फाराम
३। सम्बन्धित प्राविधिकको प्रतिवेदन
४। सम्बन्धित गापा वा नपा वा वडा वा कम्तिमा नजिकको दुईजना छिमेकी/संधियारको सर्जमिन मुचुल्का
५। आवश्यक फोटो
← २०९ बिघा जग्गामा अर्गानिक तरकारी र फलफूल खेती
द्वन्द्वकालमा यसरी लुटियो कपास विकास समिति, ८ सय बिघा अतिक्रमण →
हल्लाले दूधको कारोबार ३० प्रतिशतले घट्यो